> Resource > iPod > Video inay iPod Converter - Beddelaan Video inay iPod
Wondershare Video inay iPod Converter waa ugu fiican iPod video Converter si aad u badalo oo dhan qaabab video caadi ah in iPod taageeray qaabab video. Waxaad si fudud ku raaxaysan kartaa videos movie ugu cadcad mar walba oo aad iPod. Waxaa intaa dheer, waxa ay si buuxda u taageersan dambeeyay iPod xiriiri 4 iyo iPod Nano 5 (iPod la camera) ah. Qasabno fudud oo kaliya dhowr, aad iPod content hodan ah halkan.
Tani waa tutorial ah tallaabo-tallaabo ee kugu caawinaya in aad beddelid kasta oo ay ku jiraan video High Qeexid video, AVCHD video aad iPod Touch, Nano, iyo Classic adigoo isticmaalaya Wondershare Video inay iPod Converter. Iyada oo kaliya ka dib markii saddex tallaabo, waxaad ku dhameysan kartaa diinta videos leh tayo sare iyo xawaaraha super si degdeg ah oo iyaga ku raaxaysan aad iPod Touch 4 / iPod Touch 3 / iPod Classic / iPod Nano 4.
1 Load Videos u iPad Video Converter u Mac
Guji "Add Faylal ay" si ay u dajiyaan video / files audio ama jiidi files si ay suuqa kala file liiska si toos ah.
2 Habee saarka goobaha
Dooro qaab aad doonayso inaad wax soo saarka ka liis qaabab kala saaraa wax soo saarka ee liiska hoos-hoos Qaabka Output, sheeg buugga wax soo saarka si uu u badbaadiyo files gediyay galka wax soo saarka.
By gujinaya "Settings" doorasho hoose, waxa kale oo aad sameyn kartaa ee video /-beegyada uu la xiriira audio (xallinta, heerka jir, video encoder, heerka yara, heerka muunad iyo channel audio iwm).
3 Tayadoodii video for iPod (optional)
Si aad xaalkaa video, waxaad u baahan tahay midig u guji shayga la doonayo on saxaarad item ee suuqa hoose, iyo dooran "Edit" doorasho ka submenu ah.
Jar video : kaliya in aad dooneyso in loogu badalo clip ka file video ah. In suuqa kala goo ah, aad jar karaa dhererka video ama kala qaybsan video dheer galay qaybaha kala duwan. In sidaa la yeelo, si fudud waxayna jiidayeen Wakhtiga uu bilaabanayo iyo dhamaanayo sliders ama adigoo sameynaayo mar-beegyada uu u duurka kasta oo u dhiganta. Dalag video : ogolaanayaa inaad noola qayb ka mid ah aan la rabin ee shaashadda sida baararka madow. Codso video saamayn : Iyada oo waxtar leh video horena saamaynta iyo qalab qabsiga, qaar ka mid ah aad saamayn gaar ah si ay video ka dhigi karaa. Waxaad heli doontaa eegis ku ogaado saamaynta video ka hor iyo ka dib la qabsado oo la laba-waqtiga dhabta ah muraayadood previewing. watermark Edit : Haddii aad rabto in aad hesho video ah shakhsi ay ku daray macluumaad qaar ka mid ah waxaa sida watermark, aad oga karaa iyadoo intaa ku dartay mid ka mid ah qoraalka ama macluumaad image. Waxaad xaq u leeyihiin inay resize qoraalka / image ku daray. Ku dar fur-in Cinwaan : Haddii aad heshay videos qaar ka mid ah oo leh fur-in u dhiganta file Cinwaan (sida caadiga ah qaab SRT), waxaad ku dari kartaa Cinwaan in ay video ka hooseeya ku jira "Cinwaan "tab.
4 bilow diinta video in iPod
Markii wax walba waa diyaar, guji "Beddelaan" button ka furmkidoona qaab beddelidda. Screen horumarka A wuxuu muujin doonaa inta ay socoto meesha aad ku eegaan karo video ah. Users nidaamyada gaabis ah u badan tahay in ay doonayaan inay gab Xiisaha sida u adeegsanayaa wareegyada processor ka badan. Dhamaan hawlaha la sameyn doonaa at xawaaraha si dhakhso ah oo tayo leh oo aan fiicnayn.
Xawaaraha Fast, qeexitaanka sare, diinta ka fiican
Tababaraha iPod ayaa kaa caawinaysaa in aad si ay u gudbiyaan music, video, filimada iyo TV muujinaysaa dhaxeeya iPod iyo your computer.
Beddelaan video kala duwan si ay iPod qaab video sida MP4, M4V, MOV.
Beddelaan audio ka video in MP3 iPod, M4A iyo AAC.
Rux soo baxay tuner cusub FM.
Casriyayn New si loogu badalo HD video (oo ay ku jiraan ASF HD, HD AVI, MP4 HD, MOV HD, HD wmv, HD Mpg, HD VOB) iyo AVCHD video (oo ay ku jiraan m2ts, mts, TS, TP, trp) si iPod.
Si ka dhaqso badan sidii hore! Iyadoo multithreading iyo habka Dufcaddii taageeray, waxa ay bixisaa doorasho si toos ah aad PC xiray ka dib markii diinta.
Xoog video tafatirka - qabsaday, jar / clip, dalagga / saamayn, midowdo files, ku dar watermark
Jar dhererka wax ku daray video files in ay qabsadaan clips aad ugu jeceshahay.
Goo cidhifyada madow aad video ka iyo raaxo video on iPod la shaashad buuxda.
U ogolow in aad ku darto saamaynta video kala duwan si aad u dalbato in aad filim video.
Ha aad doorato inaad ku biirto oo dhan video files daray galay mid ka mid file.
Waxaad calaameysaa filimada aad ay ku daray sawir ama watermark qoraalka iyo qabsado meel ay, transparence iyo miisaan.
U ogolow in aad ku darto iyo edit Cinwaan la .MKV sida file il iyo surin-in Cinwaan qaab SRT si aad video.
Oo la wareegtay Screenshot movie ugu jecel yahay oo ku badbaadin sida jpeg ama qaab bmp.
Laba daaqadaha Falanqeynta waqtiga dhabta ha ee aad is barbar oo heli saamaynta video ugu fiican ee ka mid ah filimada aad.
Sida loo Beddelaan AVI in iPod
Top iPod in Computer Transfer Free